Qubanaha » Marka kuugu horreysa ee aad madaxweyne noqoto.(Maqaal Cajiib ah!)
Marka kuugu horreysa ee aad madaxweyne noqoto.(Maqaal Cajiib ah!)
Marka qofka ugu horreysa ee madaxweyne loo doorto, qofku wuxuu noqonayaa sidii qof feer lagu gaaday, labada maalmood ee ugu horreysa, waxaa ku adkaaneysa inuu rumeysto in loo doortay madaxweyne, taasoo isaga uun ku kooban.
Haddii uu yahay qof u dhashay markiisii hore naxariis, waxyaabaha qalbiga uga soo dhici kara waxaa ka mid ah; dad tiro badan oo dhibaateysan qaarkoodna ay qalfoof noqdeen, waxaa qalbigiisa buuxinaya sawir walba oo dar-xumo ah oo uu ka arkay telefishin ama wargeys xitaa waxaa sahal u noqota inuu sawirto muuqaaladii ay baahiyeen idaacadaha ee ku saabsannaa macluusha iyo abaaraha, markaas ayuu qalbiga iska yiraahdaa ”ma ahan adduunyo madaxweyne lagu noqdo ee xilka maalinta berito ah iska wareeji”.
Nafta ayaa diidda inuu xilka wareejiyo waayo qarashaadkii iyo halgankii uga baxay tartankii doorashada ayuu gocdaa, markaas buu intuu gowsaha jiriqsado qalbiga ka yiraahdaa ”wabeey cadale, maanta waa maalintaadii, maalintii aad sumcaddaada kor u qaadi lahayd oo aad yeelan lahayd magac taariikhda gala” Markaan oo kale wuxuu si tartiib ah oo meel fog ah uga soo dhacaya niyadda inuu jufada wax u qabto, haddana islamarkaas dareenka horyaala ayaa u diida oo waa uu ka gilgishaa.
Isku dhexyaac ayaa bilowda habeenka doorashada kadib madaxweynuhu wuxuu saqdhexe la gaaraa asxaabtii la ololeysay, shaah iyo kafee ayaa la wada cabaa, wixii sigaarka caba gadaal iyo horay ayay us ocdaan oo waa kuwaas qaarkood dhexdu u xiran tahay oo shaarbaha salooganaya, maxay ka fikirayaan ayay kula tahay? qosolka ayaa kaaga daran, habeenkan caawa ah urta sigaarka cid dareemeysa ma jirto xitaa haddii xashiis lagu daro, waxaa loo yaqaannaa habeenkii barakeysnaa.
Subaxda xigta waa culeys kale oo aan ka dhicin habeenkii doorashada oo albaabka waxaa soo tubta oo koox koox feyl ugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada, qorshaha ugu weyni waa hambalyo afwaajan ah.
Subaxan waa subax dareensiinaya inuu leeyahay burji ka sarreeya umadda kale, waa subax bar bilaaw u ah macaanka madaxtinimada, wuxuu arkaa odoyaal garku caddaaday oo leh ”adiga ayaan ku talo saaranay ee nagu hogaami xitaa mugdiga” Markaas baa niyadda waxaa uga soo dhaca ”oo marka odoyaal oo keliya ay ii imaanayaan aaway hablihii qurxoonaa” maya laakiin adiga waxaad tahay xaasle mayee waxaa kuu banaan afar xaas, waana la joogaa waqtigii aad guursan lahayd ayuu iskula hadlaa keligiis…
Qoraalkan ma jirto cid uu khuseeyo oo gaar ah waa dareen ku saabsan markii ugu horreysa ee madaxweyne la noqdo.
W/D Xasan Cali dhaaley.